Iyini ukuhlanganiswa phakathi kokwenza i-SEO nephrinta ye-backlink?
I-SEO ne-backlink ziyaziwa njengento ebalulekile futhi mhlawumbe izici ezinzima kunazo zonke zokukhuthazwa kwamanje kwe-intanethi - konke okukodwa. Nakuba inqubo yokwakha isixhumanisi ethathwe kuwo wonke umuntu ngokuvamile ihlobene nokusesha kwe-Intanethi ye-Search Engine, le ndawo ebaluleke kakade iye yaba yilapho ibaluleke nakakhulu - empeleni iqhuba yonke intuthuko yezinga lewebhu, ikakhulukazi eminyakeni yamuva. Ngisho ukuthi wonke amasu e-SEO nase-backlink angashintshwa ngokushesha lapho elula - nje ngokunye okuvuselelwa kokuvuselelwa kwe-algorithm okulethwa yi-Google (khumbula ukuthi ukukhathazeka okuningi kwalethwa yiPenguin. kwesokudla?). Noma kunjalo, kunezindawo eziningana zokwakheka kokubili kokuphatha i-SEO ne-backlink ngokwabo ukuba bahlale ohlangothini oluhle futhi bazizwe bephephile - ngisho nakunoma yikuphi okwenzeka njalo okushintshayo okubusa ngaleyo ndlela ebanzi futhi ephelele ye-SEO.
Ngisho ukuthi kunezimiso eziningana eziyisisekelo ezihunyushwa kahle kulowo mithetho elula kakhulu yomdlalo. Futhi kukhona ukuhlanganiswa okucacile phakathi kokusebenza jikelele ku-SEO nakwephrofayela ye-backlink onayo kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi. Ake ngikunike amanye amaphoyinti okufakazela ukuthi, kanye neziphakamiso eziningana ezingokoqobo ezizosiza ukukusiza ukuthi ukhethe amasu afanele kubo bobabili - ngoba nje ngikholelwa ukuthi i-SEO ne-backlink zenza umqondo lapho zidonsa ndawonye.
Izibonakaliso ezintathu eziyisixhumanisi esikhulu se-SEO - Emehlweni e-Google
1. Umbhalo we-anchor cishe isignali eqinile kunazo zonke ongayisebenzisa ukuze uhole futhi uphume emncintiswaneni.
2. Ukuhlanganyela kwezenhlalakahle akuyona leyo enqunyiwe, kepha kusengumcebo olinganiselwe futhi ohlala njalo ohlala njalo ohloswe yizinjini zokusesha.
3. Umlingisi oqondene nendawo noma imboni efanelekile yiyona nto yokugcina ye-SEO nama-backlink athunyelwe ngokuqondile ngabasebenzisi abaphilayo futhi asakazeke emiphakathini enentshisekelo kanye nemikhakha ekhonjiwe emakethe. Isithombe esiphezulu se-SEO ne-Backlink - Izindlela ezisebenzayo neziphakamiso
Hlela okuqukethwe okuyingqayizivele nokuyigugu okuletha inani langempela kumsebenzisi - futhi wenze Ibhulogi yakho noma ibhulogi kufaneleka ngokufanelekile emuva kwe-backlink engcono kakhulu negunya eliphakeme kakhulu kanye nekhasi le-PageRank. Yiqiniso, kuyisimo esiphuthumayo nesikhathi esiyinkimbinkimbi ngempela, kodwa ukwakha isixhumanisi sokuxhumana kuzohlale kudingeke unikeze isiphakamiso esihle kakhulu ngemibhalo yakho. Ngempela, kungani izilaleli zakho ezihlosiwe kufanele zixhumanise kuwebhusayithi yakho noma ibhulogi? Ukungasho imboni ebaluleke kunazo zonke noma abathonya be-niche noma ababhulogi abaphezulu - kumele uhlale unesithakazelo sabo.
Isimemezelo sokungenisa izivakashi ukuze uthole ama-backlink aphezulu kakhulu ngesici se-DoF esilandelayo yilolu hlobo lwamaxhumanisi empeleni asebenza ngezinhloso ze-SEO. Okungaphezulu - kungakunikeza ukubonakala okubanzi ekusesheni kwe-inthanethi, kunikezwe ukuthi unikeza isihloko esiyigugu kakhulu noma okuthunyelwe kwebhulogi okuzobe kusakazwa kwi-Social Media - okwenzela ukwabelana okuningi, ukuhola, ukukhuluma, ukubhaliselwa, kanye nokuphepha kwemvelo i-backlink ngendlela ethanda ukuhamba nayo.
Ama-backlink ezenziwe ngokwabo kufanele adalwe ukuze kube khona ukuhamba okungcono kunoma iyiphi isakhiwo sewebhu lesayithi, noma uxhumanise ijusi (a. k. a. Ukusabalalisa kwe-PR nokuthembela) ngezinhloso kuphela. Ngisho lapha ukuthi lawo ma-backlink akhiqizwa ngamazwana ebhulogi, ukufakwa kuhlu kwezivakashi noma ifomu lokubhalisa cishe njalo kuhlaziywe yizinjini ezinkulu zokusesha, yiqiniso uma kwenziwa ngaphandle kokuqonda okucacile. Ake sibhekane nalo - lolu hlobo lwezixhumanisi lungaphinde lubekwe icala. Ngeshwa, abantu abaningi basalokhu bazama ukufaka amakhasi abo ngobuningi ngezixhumanisi eziningi ezenziwe ngokwabo ngangokunokwenzeka - nje ukuze kuthuthukiswe i-SEO yabo. Eqinisweni, izixhumanisi ezinjalo eziphansi kakhulu kanye nanoma yimiphi imisebenzi yezinto ezikhohlisayo zizohlala zibukeka njenge-spammy noma ngobuqili kusukela kumbono we-Google, ngakho-ke kufaka isicelo sezinhlawulo ezinkulu Source .